Xuska Todobaadka Adeega Shacabka Oo laga xusay jigjiga. - Cakaara News
Xuska Todobaadka Adeega Shacabka Oo laga xusay jigjiga.
Jigjiga (cakaaranews) Arbaca, 27da July, 2016 waxaa maanta si heer sare ah deegaanka iyo dalkaba looga xusay munaasabada xuska todobaadka adeega shacabka taasi oo sanad kasta la xuso 20ka bishan Hamle.
Haddaba munaasad balaadhan oo uu soo diyaariyay xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdile Xasan jigjiga.
waxaana kasoo qaybgalay qaar kamid ah masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa oo ay kamid tahay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax, golaha wasiirada DDSI, Shaqaalaha Xafiisyada heer deegaan iyo marti sharaf kale.
Munaasabadan ayaa waxaa ugu horayntii kahadashay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah marwo Sucaad Axmed Faarax oo ugu horayntii shacabka deegaanka ugu hambalyaysay munaasabadan xuska todobaadka adeega shacabka. Waxayna sheegtay in ay munaasabadani tahay mid sii adkaynaysa taabo-galinta guulaha horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban. waxayna tilmaantay madaxwayne kuxigeenku inay kusoo beegantay wakhti guulo waawayn laga soo hoyiyay dhinacyada horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban islamarkaana ay kusoo hagaagtay wakhti laga soo afjaray deegaanka hadhaagii dhiigyo cabkii UBBO ee ku dhuumaalaysan jiray wadamada dariska ah.
Munaasabadan oo halku dhig looga dhigay ''in loo adeego shacabka waa sharaf, in loo adeego sidii loo tir tiri lahaa saboolnimaduna waa sharaf labaad” ayaa waxaa gabagabadii munaasabadan abaalmarino shahaado sharaf ah la gudoonsiiyay qaar kamid ah xafiisyada heer deegaan iyo shaqsiyaad noqday hormuudka shaqaalaha. waxaana gudoonsiiyay madaxwayne kuxigeenka DDSI ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah marwo sucaad axmed faarax.